समावर्तन: हामीले भुल्दै गएका संस्कार र संस्कृतिहरु
मन्त्र र श्लोक
आफु जलेर उज्यालो दिने मैन बत्ति, टाढा टाढाबाट विभिन्न फूलका रस बटुलेर मह बनाउने माहुरी अनि समुहमा मिलेर काम गर्ने कमिलाबाट हामीपनि केहि सिक्न खोजौं |
प्रकृति विजय (2)
मन्त्र र श्लोक (3)
पुराना टाँसोहरुको अभिलेख
स्वास्थ्य, सुख–शान्ति र समृद्धिको कामना
हामीले भुल्दै गएका संस्कार र संस्कृतिहरु
फेसबुकका सहयात्री मित्रहरु
नर्थ सास्काच्यून रिभर
उदगार- मनका भाव
मेरो शब्द – मेरो गीत
" मेरो बाटो मा " In My Way.....
ब्लग यात्रीहरुको संख्या
BETWAY CASINO Casino spiele ONLINE KASINO counters Party Poker
हिन्दू धर्मका संस्कारहरु
हिन्दू धर्मको संस्कृति विभिन्न संस्कारहरुमा आधारित छ । वैज्ञानिक हिसावले समेत प्रमाणित विभिन्न संस्कारहरु हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनिहरुले मानव जीवनलाई मर्यादित एवं पवित्र बनाउनका लागि आविष्कार गरेका थिए । धार्मिक मात्र नभएर वैज्ञानिक दृष्टिले पनि यी संस्कारहरु हाम्रो जीवनमा महत्वपूर्ण छन् । हिन्दू संस्कृतिको महानतामा यी संस्कारहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । प्राचिनकालमा हाम्रा प्रत्येक कार्यहरु संस्कारबाट आरम्भ हुने गर्दथे । उक्त समयमा संस्कारका संख्या पनि लगभग चालिस थिए । समयको बद्लिँदो परिस्थितिसँगै मानिसहरुमा व्यस्तता बढ्दै गयो जसले गर्दा हाम्रा केही संस्कारहरु स्वतः विलुप्त भए । यसप्रकार समय अनुसार संसोधित भएर संस्कारहरुको संख्या निर्धारण भए । गौतम स्मृतिमा चालिस प्रकारका संस्कारहरुको उल्लेख भएको पाइन्छ । महर्षी अंगिराले यिनको अन्तर्भाव पच्चिस संस्कारमा गर्नुभएको छ त्यस्तै व्यास स्मृतिमा सोह्र संस्कारको वर्णन गरीएको छ ।
हाम्रो धर्मशास्त्रमा पनि मुख्यरुपमा सोह्र संस्कारकै व्याख्या गरिएको छ । हिन्दू धर्ममा सबैभन्दा पहिलो गर्भाधान संस्कार र मृत्युपरान्त अन्त्येष्टि अन्तिम संस्कार हो । गर्भाधानपछि पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामांकरण आदी संस्कार नवजात शिशुको यस दैवी जगत्सँग सम्बन्ध स्थापनाका लागि गरीन्छ । नामांकरण संस्कारपछि चूडाकर्म संस्कार र यज्ञोपवीत संस्कार हुन्छ अनि त्यसपछि विवाह संस्कार गरीन्छ । विवाह संस्कार गृहस्थ जीवनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार हो । विवाहलाई हिन्दूधर्ममा स्त्री र पूरुष दुवैको लागि सवैभन्दा महत्वपूर्ण संस्कारको रुपमा लिईएको छ । विवाहलाई जन्म जन्मान्तरको सम्बन्ध मानिन्छ । विभिन्न धार्मिक ग्रन्थ अनुसार संस्कारहरुको क्रम पनि भिन्न भिन्नरुपमा देखाइएको छ तर प्रचलित संस्कारका क्रमहरु यसप्रकार रहेका छन् ः गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामांकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, विद्यारम्भ, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, वेदारम्भ, केशान्त, समावर्तन, विवाह तथा अन्त्येष्टि । गर्भाधानदेखि विद्यारम्भसम्मका संस्कारहरुलाई गर्भसंस्कार पनि भनिन्छ यिनीहरुमा पहिला तीन संस्कारहरु गर्भाधान, पुंसवन र सीमन्तान्नयनलाई अन्तर्गर्भ संस्कार तथा यसपछिका छ संस्कारहरुलाई वहिर्गर्भ संस्कार भनिन्छ र गर्भ संस्कारलाई दोष मार्र्जन अथवा शोधक संस्कार पनि भनिन्छ । दोष मार्जन संस्कार कुनैपनि शिशुमा पूर्वजन्मबाट आएको धर्मकर्म सम्बन्धी दोष तथा गर्भमा आउने विकृतिलाई मार्जन गर्नका लागि गरिने संस्कार हो । पछिका छ वटा संस्कारहरुलाई गुणाधान संस्कार भनिन्छ । गुणाधान संस्कार दोषमार्जन गरिसकेपछि मानिसमा सप्तगुणको अभिवृद्धिकालागि गरिने संस्कार हो । हाम्रा पूर्वज तथा ऋषिमुनिहरुले हामीलाई सुसंस्कृत तथा समाजिक र नैतिकवान बनाउनका लागी अथक प्रयास तथा सोधको परिणाम स्वरुप यी संस्कारहरुको स्थापना गरेका थिए । यस्तै विविध संस्कारहरुका कारण हिन्दू धर्म र संस्कृति अद्धितीय छ । अहिलेको प्रविधिको चरम् विकास तथा मानिसहरुको व्यस्तताका कारण सनातन धर्मावलम्बीहरु अब यी संस्कारका मुल्यमान्यताहरुलाई भुल्दै गइरहेको पाइन्छ । यसैको फलस्वरुप मानिसहरुको चारित्रिक गिरावट, संवेदनहीनता, असामाजिकता, हिंसा र गुरुहरुको अवज्ञा, अनुशासनहीनता इत्यादी कुराहरुले हाम्रो समाजमा प्रश्रय पाइरहेका छन् । धेरै मानिसहरु आफ्नो कर्तव्यपथबाट विमुख भई निकृष्ट कृयाकलापतर्फ लागेको देखिन्छ । हो, समय अनुसार परिवर्तित हुनु आवश्यक छ तर हाम्रा ऋषिमुनीहरुद्वारा स्थापित मूलभूत सिद्धान्तहरुलाई नकार्न कहिलेपनि श्रेयष्कर हुँदैन । आदिकालदेखि चलिआएको परम्परा र मान्यतालाई पक्कै पनि कुल्चनु हुन्न । यी सबै संस्कारहरु सत्यता र वैज्ञानिक आधारले प्रमाण्ति छन् । अहिले पूर्वीय धर्मदर्शनलाई अध्ययन गरी पश्चिमी मुलुकका धेरै मानिसहरु यो धर्मसंस्कारलाई अंगाली रहेको तथ्य हामीसामू छर्लङ्ग छ तर हामी भने दैनिक टाढा–टाढा भईरहेका छौ । हाम्रा महान र मौलिक संस्कारहरुको परिचय निम्नानुसार रहेको छ ।
१. गर्भाधान संस्कार
हिन्दू संस्कारमा मान्य सोह्र संस्कारहरुमध्ये सबैभन्दा पहिलो संस्कार गर्भाधान संस्कार हो । गृहस्थ जीवनमा प्रवेश पश्चात प्रथम कर्तव्यको रुपमा यो संस्कारलाई मान्यता दिइएको छ । गृहस्थ जीवनको प्रमुख उद्देश्य भनेको उत्तम वंशोत्पत्ती हो । विकृत शारिरिक,मानसिक,संस्कृति र संस्कारका वावजुद श्रेष्ठ सन्तानोत्पत्ती असम्भवप्रायः हुन्छ अतः उत्तम सन्तान्तको चाहना राख्ने मातापिताको गर्भाधानपूर्व आफ्नो तन–मनको पवित्रताको लागी यो संस्कार गर्ने गरीन्छ । वैदिककालमा यो संस्कारलाई अति महत्वका साथ पालन गर्ने गरिन्थ्यो । आजभोली यो संस्कारलाई उतिसारो पछ्याएको देखिन्न ।
हिन्दूशास्त्रको दोस्रो महत्वपूर्ण संस्कारको रुपमा पुंसवन संस्कारलाई लिइएको छ । गर्भमा विकसित अवस्थामा रहेको शिशुको मानसिक विकासको दृष्टिले यो संस्कार उपयोगी संस्कार बुझिएको छ । शास्त्रअनुसार गर्भाधान भएको दोस्रो वा तेस्रो महिनामा यो संस्कार गर्ने गरिन्छ । गर्भमा स्वस्थ एवं उत्तम सन्तानको विकास होस् भन्ने अभिष्टले पुंसवन संस्कार गरीन्छ । गर्भस्थ शिशुसँग सम्बन्धित यो संस्कार शुभ नक्षत्रमा सम्पन्न गरिन्छ ।
३. सीमन्तोन्नयत संस्कार
अन्तर्गर्भ संस्कारको तेस्रो महत्वपूर्ण संस्कारको रुपमा सीमन्तोन्नयन अथवा सीमन्त संस्कार गरीन्छ । गर्भमा विकसित शिशुलाई अत्यन्त सौभाग्य सम्पन्न बनाउनु यो संस्कारको अभिप्राय हो । सीमन्तोन्नयन संस्कार गर्भपात रोक्न, गर्भस्थ शिशु एवं आमाको रक्षार्थ पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । गर्भवती आमाको मन प्रशन्न, स्वस्थ शरिर तथा स्वच्छ मानसिकता भएमा गर्भस्थ शिशुपनि सोही अनुसार विकसित हुने वैज्ञानिक मान्यतामा यो संस्कार गर्भवती आमा र शिशु दुवैको लागि लाभदायक मानिएको छ । गर्भधारणको छैठौं अथवा आठौँ महिनामा यो संस्कार गरीन्छ ।
४. जातकर्म संस्कार
जातकर्म संस्कार शिशुको नालच्छेदनपूर्व गर्ने विधान रहेको छ । यो संस्कार गर्दा यो दैवि जगत्को प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने नवजात शिशुलाई अन्त्यन्त बल, बुद्धि, सौभाग्य र दीर्घायु प्राप्त होस् भनी वैदिक मन्त्रोच्चारणका घिऊ र महको समिश्रण चटाइन्छ । यो संस्कार अति विशेष मन्त्र र विधिका साथ गर्ने चलन रहेको छ । नवजात शिशुका पिताले विषेश मन्त्र सहित शिशु बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ, दीर्घजीवनका लागि प्रार्थना गर्छन तत्पश्चात आमाले स्तनपान गराउँछीन ।
५. नामांकरण (न्वारान)
सामान्यरुपमा न्वारान भनिने यो चलन शिशु जन्मेको ११ औं दिनमा गर्ने गरीन्छ । परापूर्वकालदेखि शिशु जन्मेको १० औं दिनसम्मलाई सुतक मानिन्छ तसर्थ ११ औं दिनमा यो संस्कार गर्ने चलन छ । कर्मकाण्ड र महर्षीहरु यो संस्कार शुभ नक्षत्र वा शुभ दिनमा गर्नु उचित मान्छन् । नामको हाम्रो जीवनमा धेरै महत्व हुन्छ । नामबाट नै व्यक्तित्वको विकास र प्रभाव हुने भएकोले नामको महत्व रहेको छ । ज्योतिष शास्त्रले नाम कै आधारमा भविष्यको रुपरेखा तयार गर्दछ । हिन्दू शास्त्रमा शिशुको जन्म तिथि, घडि, पला, नक्षत्र, समय र स्थान आदीलाई आधार मानेर नामांकरण गर्ने चलन रहेको छ ।
६. निष्क्रमण संस्कार
नवजात शिशुको यस दैविजगतमा आगमन पश्चात यसप्रति प्रगाढता बढाउनु तथा परम्ब्रम्हाको नजरमा चिरपरिचित भई दीर्घकालसम्म धर्म र मर्यादामा रही यस लोकको भोग गराउनु यो संस्कारको प्रमुख उद्देश्य हो । निष्क्रमणको अर्थ हुन्छ बाहिर निस्कनु । यो संस्कारमा नवजात शिशुलाई चन्द्रमा र सूर्यको दर्शन गराइन्छ । शिशुलाई भगवान भाष्करको तेज र चन्द्रमाको शीतलताको अवगत गराई शिशुलाई भाष्कर झैं तेजश्वी र चन्द्रम झैं विनम्र बनाउने परिकल्पना गर्दै त्यस दिन देवी देवताहरुको दर्शन गराई दीर्घ एवं यशश्वी जीवनकोलागि आशिर्वाद ग्रहण गराइन्छ । वैज्ञानिक हिसावले पनि नवजात शिशुको शरिर तीन महिनासम्म बाहिरी वातावरण, घाम, हावा आदिसँग अनुकुल हुँदैन यसर्थ तीन महिनासम्म सावधानीपूर्वक घर भित्रै राखिन्छ । यसपछि शिशुलाई विस्तारै विस्तारै बाहिरी वातावरणको सम्पर्कमा ल्याउनु उचित हुन्छ । विशेषतः यो संस्कार शिशुलाई यो जगत, आफ्नो समाज, वातावरण र हरेक सामाजिक परिस्थितिसँग अवगत गराउनका लागि गरिन्छ ।
जव शिशु विकसित हुँदै जान्छ स्तनपानबाट प्राप्तहुने पौष्टिकता र आहार मात्र शिशुको शारिरिक र मानसिक विकासमा प्रशस्त हुँदैन । उक्तकुरालाई ध्यानदिँदै अन्नप्राशन संस्कार गरीन्छ । जन्मने वित्तिकै शिशुको शरिरमा वाहिरी खाद्यान्न पचाउनसक्ने क्षमता हुँदैन । अन्नप्राशनको स्पष्ट अर्थ यो हो की शिशु अब पेय पदार्थ विषेशगरी आमाको दूधमा निर्भर नभई अन्न (जसलाई शास्त्रमा प्राण भनिएको छ ) ग्रहण गरी शारीरिक र मानसिक रुपमा आफूलाई बलबान र प्रवुद्ध बनाउन योग्य हो । तन र मनलाई सुदृढ बनाउनलाई अन्नको सर्वाधिक योगदान छ । शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक आहारले तन, मन स्वस्थ रहन्छ । स्वस्थ तनमा नै स्वस्थ मनको निवास हुन्छ । शुद्ध र सात्विक आहारले नै अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ तथा मन, बुद्धि, आत्मा सबैलाई पोषण मिल्छ । यसैकारण अन्नप्राशन संस्कारको हाम्रो जीवनमा विषेश महत्व छ । हिन्दूधर्मका अनुयायीहरुले अन्नप्राशन जन्मको छैठौं महिनालाई उपयुक्त बताउँछन् । छैठौं महिनामा शुभ नक्षत्र एवं शुभ दिन हेराएर यो संस्कार गरीन्छ । उक्त दिन खीर र मीठा मीठा मिष्ठान्न शिशुको अन्नग्रहणका लागि शुभ मानिन्छ । अमृतः क्षीरभोजनम् –हिन्दूशास्त्रमा खीरलाई अमृत समान उत्तम मानिन्छ । हाम्रो समाजमा अन्नप्राशनका दिन आफ्ना छिमेकी, नातेदार, आफन्तजनलाई बोलाई प्रसाद खुवाउने र शिशुलाई विभिन्न उपहार दिने समेत चलन छ ।
८. चूडाकर्म (छेवार)
चूडाकर्म संस्कारलाई मुण्डन वा छेवार पनि भनिन्छ । शिशु नौ महिनासम्म गर्भमा रहँदाताका उत्पन्न केशमा अनेकौं किसिमका दूषित किटाणुहरु रहेका हुन्छन र जन्मको समयमा उत्पन्न अपवित्र केशलाई हटाई शिशुको प्रखर बनाउनु यो संस्कारको अभिप्राय रहेको छ । बालकको तीन या पाँचौ वर्षमा यो संस्कार गरिने विधान रहेको छ । यो संस्कारपछि बालको बौद्धिक विकास र शुभचिन्ताको परिकल्पना गरिन्छ । गर्भमा रहँदाका केशमा रहेको दोषलाई सफाया गर्नु यो संस्कारको उद्देश्य हो । ज्योतीष शास्त्रका अनुसार यो संस्कार शुभमुहूर्तमा बैदिक मंन्त्रोच्चारणका साथ सम्पन्न गरीन्छ ।
९. विद्यारम्भ संस्कार
हिन्दू संस्कारका क्रममा विद्यारम्भ संस्कारको विषयमा धर्माचार्यहरुको केही मतभिन्नता रहेको पाइन्छ । केही धर्माचार्यहरु विद्यारम्भ अन्नप्राशन पछि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन त केही चूडाकर्म संस्कारपछि विद्यारम्भ हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा छन् । वास्तवमा अन्नप्राशनको उमेरमा शिशुमा बोल्न वा केही सिक्नसक्ने गरी शारीरिक वा मानसिक विकासभएको हुँदैन अतः यो संस्कार चूडाकर्मपछि गरे नै उपयुक्त हुने मान्यताले अग्रता पाएको देखिन्छ । नामबाट नै प्रष्ट छ की विद्यारम्भ भन्नाले विद्या आरम्भ गर्नु । विद्यारम्भ संस्कारको अभिप्राय बालकमा प्रारम्भिकस्तको शिक्षासँग परिचित गराउनु हो । प्राचिन समयमा जब गुरुकुलको परम्परा थियो उक्त समयमा गुरुकुलमा भर्नागर्नुृपूर्व घरमै मातापिता तथा गुरुजनबाट अक्षरबोध तथ मौखिकरुपमा श्लोक, पौराणिक कथा आदिको अभ्यास गराइन्थ्यो जसबाट बालकलाई गुरुकुलमा सिक्न कठिनाइ हुँदैन थियो । हिन्दू शास्त्र विद्यालाई प्राथमिता दिने शास्त्र हो । सा विद्या या विमुक्तये– अर्थात् विद्या नै त्यही चिज हो जसले मुक्ति दिलाउँछ । विद्या अथवा ज्ञान नै मनुष्यको आत्मिक उन्नतीको साधन हो । शुभ मुहूर्तमा नै विद्यारम्भ संस्कार गरिनु पर्दछ । हाम्रो समाजमा आजभोली सरस्वती पूजाका दिनबाट बालबालिकालाई विद्यारम्भ गराउने चलन रहेको देखिन्छ भने कहीँ कहीँ मुहूर्त निकालेर विद्यारम्भ गराएको समेत पाइन्छ ।
१०. कर्णवेध संस्कार
हिन्दूहरुका संस्कारहरु कुनै न कुनै कोणबाट वैज्ञानिक तवरबाट मुल्यांङ्कन वा प्रमाणित गरी प्रारम्भ भएको पाइन्छ । कर्णवेध संस्कारको आधार पनि विल्कुलै वैज्ञानिक नै रहेको छ । बालबालिकालाई शारिरिक व्यधिबाट रक्षा गर्नु यो संस्कारको मूल उद्देश्य हो । प्रकृति प्रदत्त हाम्रो शरिरका सबै अंगहरु उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेका छन् । कान हाम्रो श्रवणद्वार हो । सम्पूर्ण श्रुतिहरु कानबाट नै हाम्रो मस्तिष्कमा पुग्दछन् । कर्णवेधन गर्नाले व्यधिहरुबाट सुरक्षित हुनुका साथै श्रवण शक्ति पनि बढ्छ यसका साथै कानमा आभूषण हाम्रो सौन्दर्यबोधको परिचायक पनि हो । यज्ञोपवीत संस्कारपूर्व यो संस्कार गरिने विधान छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार शुक्ल पक्षको शुभ मुहुर्तमा यो संस्कार सम्पन्न गर्दा श्रेयष्कर हुन्छ ।
११. यज्ञोपवीत (उपनयन वा ब्रतबन्ध) संस्कार
यो संस्कार बौद्धिक विकासको लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार हो । यो संस्कारमा धार्मिक र अध्यात्मिक उन्नतिको पूर्ण समावेश छ । यो संस्कारबाट हाम्रा ऋषिमुनीहरुले वेदमाता गायत्रीको आत्मासात् गर्ने प्रावधान दिएकाछन् । आधुनिक युगमा समेत गायत्रीमंत्रको विषेश शोध भइसकेको छ र उक्त सोधबाट गायत्री मंत्र सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र प्रमाणित भएको छ । यज्ञोपवीतम् परम् पवित्रम् – यज्ञोपवीत जसलाई हामी जनइ भन्छौ्रँ अत्यन्तै पवित्र छ । प्रजापतिले स्वाभाविकरुपमा यसको निर्माण गर्नुभएको हो । जनई हेर्दा सामान्य लागे पनि आयुबद्र्धक, बल र तेज प्रदान गर्ने सामथ्र्य राख्दछ । यो संस्कारलाई धर्मशास्त्रमा विषेशरुपले उल्लेख गरिएकोछ । जनइ धारणको वैज्ञानिक महत्व पनि रहेको छ । प्राचीनकालमा जब गुरुकुलको परम्परा थियो त्यससमयमा प्रायः आठ वर्षको उमेरमा यो संस्कार सम्पन्न गरिन्थ्यो । यो संस्कारपछि बालकलाई विषेश अध्ययनको लागि गुरुकुल पठाइन्थयो । यज्ञोपवीतबाट नै बालकलाई ब्रम्हचर्यको दीक्षा दिइन्थ्यो र जसको पालना गृहस्थाश्रम आउनुपूर्वसम्म गर्नु पर्दथ्यो । यो संस्कारको उद्देश्य संयमितता अपनाई आत्मिक विकासमा लागिरहन प्रेरित गर्नु हो ।
१२. वेदारम्भ संस्कार
यो संस्कार प्राचीन समयमा महत्वपूर्ण भए पनि समयको बद्लावसँगै लगभग विलुप्त भईसकेको छ । यो संस्कार ज्ञानआर्जनसँग सम्बन्धित छ । वेदको अर्थ हो ज्ञान र वेदारम्भको माध्यमबाट बालकलाई आफूभित्र ज्ञान र समाविष्ट गर्न शुरु गराउनु नै यो संस्कारको अभिप्राय हो । शास्त्रमा ज्ञानभन्दा ठूलो अर्को कुनै प्रकाश छैन भनिएको छ । यो स्पष्ट छ की प्राचीनकालमा यो संस्कार मानिसको जीवनमा विशेष महत्व राख्दथ्यो । यज्ञोपवीतपछि बालकलाई वेदहरुको अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञानहरुसँग परिचित गराउन योग्य आचार्यहरुको अभिभावकत्वमा गुरुकुल पठाइन्थ्यो । वेदारम्भ गर्नुभन्दा पहिा आचार्य आफ्ना शिष्यहरुको ब्रम्हचर्य व्रतको पालन एवं संयमित जीवन बाँच्ने प्रतिज्ञा गराई उक्तकुराको परीक्षा लिएपछि मात्र वेद अध्यापन गराउने गर्दथे । अंयमित जीवन, अनुशासनहीनहरुलाई वेद अध्ययनको आधिकारीकता दिईँदैन थियो । चारै वेदहरुलाई ज्ञानको अक्षुण्ण भण्डार मानिन्छ । आजभोली समेत वेदलाई ज्ञान र तथ्यको महान ग्रन्थका रुपमा पश्चिमीहरुले समेत अध्ययन गर्दछन् ।
१३. केशान्त संस्कार
आजभोली हिन्दू संस्कारका धेरै क्रम–उपक्रमहरु व्यस्तता र आधुनिकीकरणका वावजुद विलुप्तहुँदै गइरहेका छन् । केशान्त संस्कार गुरुकुलमा वेद अध्ययन पूरा गरेपछि आचार्यको समक्ष यो संस्कार गरिन्थ्यो । वस्तुतः यो संस्कार गुरुकुलबाट विदा लिने तथा गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्ने उपक्रम हो । वेद, पुराण एवं कर्मकाण्डमा पारंगत भएपछि ब्रम्हचारी शिष्यलाई समावर्तन संस्कारभन्दा पहिला केश मुण्डन गरी नुहाइ स्नातकको उपाधि दिइन्थ्यो । केशान्त संस्कार शुभमुहूर्तमा गरिन्छ ।
यो संस्कार परापूर्वकालदेखि चलिआएको संस्कार हो । यो संस्कारलाई आजभोली आधुनिकीकरण गरिएको छ । गुरुकुलबाट शिक्षा लिईसकेपछि विदाई लिनुपूर्व शिष्यको समावर्तन संस्कार हुने गर्दथ्यो । यो संस्कारभन्दा ठीक अगाडि ब्रम्हचारी शिष्यको केशान्त संस्कार हुन्थ्यो । समावर्तन संस्कारमा शिष्यलाई समावर्तनका लागि सुगन्धित पदार्थ एवं औषधियुक्त वेदीका उत्तरभागमा आठवटा घडाका जलले स्नान गर्ने विधि छ । यो स्नान विषेश मन्त्रोच्चारणका साथ गर्ने गरीन्छ । यसपछि यज्ञोपवीतका समयमा धारण गरिएका मेखला र दण्डलाई छोड्ने चलन छ । यस संस्कारपछि गुरु वा आचार्यहरुले शिष्यलाई विद्या स्नातकको उपाधि दिने गर्दथे । यो उपाधि पाएपछि शिष्य सगौरव गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्न आधिकारीक हुन्छन । संस्कारका समयमा सुन्दर वस्त्र एवं आभूषण धारण गरी आचार्य एवं गुरुजनबाट आशिर्वाद ग्रहण गरी आफ्नो घरतर्फ लाग्दथे । यो संस्कार आजभोली टाढा–टाढा वा आफ्नो इलाकाका स्कूल, कलेज अध्ययन गर्नजाने विद्यार्थीहरुले आफ्नो अध्ययनको चरण पूरा भएपछि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी आधुनिक रुपमा सम्पन्न गर्दछन् ।
१५. विवाह संस्कार
यो संस्कार परापूर्वकालदेखि नै स्त्री र पुरुष दुवैको लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कारको रुपमा रहिआएको छ । हिन्दू शास्त्रमा पुरुष यज्ञोपवीत संस्कारदेखी समावर्तन संस्कारसम्म ब्रम्हचर्य व्रतको पालनगर्ने हाम्रो शास्त्रमा विधान छ । प्राचीनसमयको वेदाध्ययन वा आजभोलीको स्नातकपछि जब युवकमा सामाजिक परम्परा निर्वाह गर्ने क्षमता र परिपक्वता आउँछ तव गृहस्थ धर्ममा समाजिक रुपमा प्रवेश गराइन्छ । लगभग पच्चीस वर्षसम्म ब्रम्हचर्यको व्रत पालना गरेपछि युवक परिणय सूत्र (विवाह बन्धन) मा बाँधिन्छ । शास्त्रमा आठ प्रकारका विवाहरुको उ्रल्लेख भएको पाइन्छ जसलाई यो ब्लगको यस अघिको प्रविष्टमा संक्षेप परिचय सहित उल्लेख गरिसकिएको छ । वैदिककालमा आठै प्रकारका विवाहका प्रथाहरु प्रचलित थिए । समय अनुसार विवाहका स्वरुपहरु बद्लिँदै गए । वैदिककालपूर्व जतिवेला हाम्रो समाज संगठित थिएन त्यो समयमा उच्छृंखल यौनाचारहरु हुने गर्दथे । ऋषिमुनीहरुले यो उच्छृंखलतालाई समाप्त गर्नकालागि विवाह संस्कारको स्थापना गरी समाजलाई संगठित, मर्यादित एवं नियमबद्ध गर्ने प्रयाहरु भएका थिए । आज उनिहरुको प्रयासकै परिणाम हाम्रो समाज सभ्य र सुसंस्कृत छ । पश्चिमी दर्शन भन्दा पवित्र र मर्यादित तवरमा विवाहका सामाजिक मान्यताहरु रहिरहेका छन् ।
मृत्यु पश्चातहुने संस्कारलाई अत्येष्टि अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भनिन्छ । आत्मामा अग्निको आधान गर्नु नै अग्नी परिग्रह हो । मृत शरिरलाई विधिवत् क्रिया गरिसकेपछि मात्र जीवको अतृप्त वासना शान्त हुने कुरा धर्मशास्त्रको मान्यता रहेको छ । हिन्दू शास्त्रमा धेरै सहज ढंगले इहलोक र परलोकको परिकल्पना गरिएको छ । जब जीव शरीर धारण गरी इहलोक निवासी हुन्छौँ त्यतिवेला हामी विभिन्न कर्मका बन्धनमा हुन्छौँ । शरीरबाट प्राण छुटेपछि यो लोक छोडी त्यसपछिका विभिन्न परिकल्पनामा विभिन्न लोकका साथै मोक्ष प्राप्त गर्ने कुरा गरीन्छ । मानिसले आफ्नो कर्म अनुसारको फल भोग्नुपर्छ । यहि परिकल्पनाको आडमा मृत शरीरको विधिवत अग्निका साथ क्रिया हुन्छ । विभिन्न धर्ममा आ–आफनै तवरवाट मृत शरीरको अन्त्येष्टि गर्ने चलन छ । मृत शरीरलाई जमिनमा गाड्ने, नदी खोलामा बगाउने, टुक्रा–टुक्रा गरी चिल वा गिद्धलाई खुवाउने जस्ता चलनहरु चलिआएका छन् तर पर्यावरणीय दृष्टिले अग्निका साथ गरीने क्रिया राम्रो मानिएको छ ।
पर्यावरणीय दृष्टिले मनुष्यको अन्त्येष्टि पनि अहिलेको विश्वमा विकराल समस्याको रुपमा देखा परेको छ । विभिन्न धर्मावलम्बीहरुले मृत शरीरलाई जमीनमा गाड्ने र त्यसमाथि क्रंक्रिटका स–साना आधारहरु निर्माण गर्नाले भोलिको दिनमा समस्याको रुपलिने निश्चित प्रायः छ । हालै चिनमा त्यस्ता किसिमका निर्माण नगर्न र सकेसम्म वैकल्पिक तवरबाट मृतशरीरलाई शमन गर्ने विकल्पका रुपमा अग्निशमनलाई लिएको छ ।
स्रोत : हिन्दू संस्कार परिचय उल्लेख भएका विभिन्न वेव साइटहरु र स्वध्ययन
पोस्ट गर्ने : समावर्तन
शिर्षक : धर्म संस्कृति
Paresh, April 28, 2010 at 10:54 PM
विचार र लेखको लागि धन्यवाद
सुमधुर भजनहरु सुन्नलाइ भजनको नाममा क्लिक गर्नुहोस
काठमाडौँको मौसमी जानकारी
नेपालको वर्तमान समय
गफगाफ गर्ने ठाउं
नेपालीमा लेख्दा लेख्दै अंग्रेजी लेख्नु परेमा अनि अंग्रेजी लेखिसकेपछि फेरी नेपाली लेख्नु परेमा Ctrl+g थिच्नुहोस |
©2009 समावर्तन | Template Setting by Samawartan